Raikitra ny savorovoro tany Andramasina : nifampitadiavana hosamborina ny ben’ny Tanàna sy ny mpanao gazety | NewsMada
Raikitra ny savorovoro tany Andramasina : nifampitadiavana hosamborina ny ben’ny Tanàna sy ny mpanao gazety
Niharan’ny antsojay sy ny fampihorohoroana ny ben’ny Tanànan’Alarobia Vatosola, i Bina, manohana ny hetsiky ny depiote ho an’ny fanovana tany Andramasina, omaly. Tsy afa-bela koa ny mpanao gazetin’ny Kolo TV/FM.
Nitarika vahoaka nilanja sora-baventy mitaky ny fialan’izao fitondrana izao ny tenany tao Andramasina , tamin’ny fahatongavan’ny filoha Rajaonarimampianina tany an-toerana nizara kara-tany. Nosakanan’ny mpitandro filaminana anefa izany ary noraofina koa ny sora-baventy nentin’izy ireo. Mbola tafaporitsaka ihany anefa ireo vahoaka ary tafiditra teny amin’ny kianja nanaovana ny lanonana ka namoaka ny taratasy maneho ny fitakiana ny fialan’ny filoham-pirenena.
Etsy andaniny, norahonan’ny mpitandro filaminana ny mpanao gazetin’ny Kolo TV/FM nanao ny asany naka sary izany rehetra izany. Tsy nanaiky hatramin’ny farany ny hamafana ny sary amin’ny “camera” ny tenany ary tafaporitsaka nandositra avy eo.
Fitondrana jadona sy tsy refesi-mandidy
Tahaka izany koa, nandositra niafina rehefa nifampitadiavan’ny mpitandro filaminana ny ben’ny Tanàna, i Bina. “Nokarohin’ny zandary izahay ary mbola miafina aty amin’ny tokantranon’olona. Narovan’ny vahoakan’ Andramasina… Mbola maneho ny jadona sy mampihorohoro ary tsy refesi-mandidy ny mpitondra…”, hoy izy.
Nangadihady sy nihanjahanja ny filoha Rajaonarimampianina sy ireo nanara-dia azy satria nialan’ny vahoaka, nandritra izany rehetra izany.
Araka izany, voatohintohina indray aloha izany ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety. Eo koa ny tsy fahazakan’ny mpitondra fahalalahana maneho hevitra sy ny demokrasia ka mahatonga ireo tompomenakely sasany mihoa-pefy sy manao antsojay ireo tsy mitovy hevitra aminy.